Amabhayisikili ochwepheshe: izici zokuthutha
Abaningi bamabhayisikili abahamba ngezinyawo banombuzo mayelana nohlobo phakathi kwebhayisikili yama-amateur nebhayisikili yobuchwepheshe. Phela, abagijimi bahamba ngokushesha futhi bahamba ngokuhamba phambili! Ngesikhathi semidlalo indima enkulu idlala ngokuqeqeshwa, akukho okubaluleke kakhulu ukukhetha kwezithuthi. Kubalulekile ukunaka zonke izici.
Amabhayisikili ochwepheshe afika kulezi zinhlobo ezilandelayo:
Ukuthutha kwama-amateur kulungile kubaqalayo kuleli bhizinisi. Kuzoqinisekisa ukuthi ufuna ukuqhuba lo mdlalo noma cha. Uma kunesifiso esinamandla sokuba yinkosi kuleli bhizinisi, ke amabhayisikili ochwepheshe afaneleka kakhulu. Kunconywa ukuthenga ibhayisikili ozithandayo, njengoba kuzoletha injabulo kukho konke ukuqeqeshwa.
Ezokuthutha zithengiswa esitolo esikhethekile. Ihluke hhayi kuphela kwizici zayo, kodwa nakwezemidlalo. Kulabo abafuna ukuzibandakanya emabhayisikili abahamba phambili abahamba phambili ngokwehla. Futhi kuyadingeka ukunquma uhlobo lokunciphisa, uhlobo lwepulaki, isifo saso, izinga lokubheja, ukudluliselwa, uhlobo lwawo, isilinganiso segiya.
Umehluko omkhulu phakathi kwamabhayisikili ukufika kwawo, lapho kuncike khona ngokusemandleni. Ezokuthutha ezivamile, ezingasetshenziselwa ukushayela okusheshayo, kuqondile futhi kulungile. Kulesi simo, ibhayisikili ingasetshenziselwa ukuhamba okuvamile.
Amabhayisikili omgwaqo asemaphandleni ahamba kancane. Abagijimi bazinikela kalula ngokusheshisa, ngokuhamba phambili. Yingakho behamba ngokuhlakanipha.
Izindlela zokuhamba ezisezingeni elivamile zinezingxenye ezivamile, ubuchwepheshe besimanje abusetshenziselwa ukukhiqiza. Izitimela zezintaba ezinhle zenziwa ezintweni ezithembekile kakhulu. Isibonelo, ngokuvamile ekukhiqizeni ifreyimu esetshenziswa i-carbon. Ukwakhiwa kwe-CFRP kuyabiza kakhulu, yingakho intengo yokuthutha izoba phezulu.
I-Carbon inezinzuzo ezifana nalezi:
Yingakho ibhayisikili enjalo ibhekwa njengenye yekhwalithi. Amafayili ama-aluminium abizayo asetshenziswa ngokusebenzisa ubuchwepheshe bokubamba, okubandakanya ukunciphisa izindonga zefreyimu ngaphandle kokulahlekelwa kwezakhiwo. Lo msebenzi ubuyinkimbinkimbi, ngakho-ke intengo yokuthutha izoba phezulu.
Abakhiqizi bebhayisikili basebenza ngentshiseko ekwakheni ubuchwepheshe obusha. Ukudluliselwa ngayinye kulula kakhulu. Ezisezindleko eziphansi zokushintsha ijubane usethe amazinga ambalwa. Akuyona yonke inkinobho yezokuthutha esebenza ngokuthembeka. Ngenxa yokushayela njalo lo msebenzi kungenzeka uhluleke.
Amabhayisikili asemgwaqweni ahamba phambili anamazinga angcono okuvinjelwa. Kungenziwa ngezifiso zemidlalo ehlukene. Futhi kusukela ekuthuthweni kukhona intwasahlobo enomfanekiso, inkinobho ayidingi ukumnika okuvamile.
Izitimela zezintaba ezisebenza kahle zinamabhuleki e-disc hydraulic. Uhlobo lokushayela luthonya inani lamapistoni nobubanzi be-rotor. Ama-rotors amakhulu kanye nabalindi bamapistoni angu-4 adingekayo ekwehleni nasekuzimele.
Ngebhayisikili yezemidlalo ehamba phambili , ama-pistoni amabili, i-rotor 180 mm ifakiwe. Uma udinga ukuzishintsha, udinga i-adapters. Emabhayisikili omgwaqo , ama-brakes awadlali indima ebalulekile. Kuzo zonke izinhlobo zokuthutha kwezobuchwepheshe kukhona ukushayela komuthi, kodwa kungaba namazinga ahlukene.
Amabhayisikili amasha namachwepheshe ahluke kakhulu kumanani. Lokhu kungenxa yokuthi imininingwane yimuphi imfanelo esetshenziselwa ukudalwa kwezithuthi. Uma ufuna ukuthenga ibhayisikili elinokwethenjelwa, akufanele ubheke izinhlobo eziphansi. Amathekisthi ama-racers ochwepheshe abiza kakhulu.
Ngakho-ke, udinga ukunquma ngokushesha ukuthi yini oyidingayo - ukuthutha imincintiswano noma ukuhamba. Amanani angase ahluke kusuka kumenzi kuya kumkhiqizi. Ukuze uhambo olungavamile, asikho isidingo sokuthenga ibhayisikili elibizayo.
Amabhayisikili aqeqeshiwe awafanelanga abalandeli, bakhetha ukusebenzisa amabhayisikili avamile. Ngaphezu kwalokho, izindleko zayo ziphansi kakhulu. Ezokuthutha kubhekwe njengento yonke, kulula ukuzinakekela, futhi ukhetho lwazo luhlukile kakhulu.
Ububanzi bamagesi wamasentimitha angu-26-28;
Uhlaka lwe-aluminium ;
Kuye ngesibonelo, ezinye imininingwane zingase zifakwe. Uma kukhona ukuhamba okuvamile ngaphandle komuzi, kungcono ukhethe imodeli nge-absorck absorbers. Leli bhayisikili lilungele ukuhamba ngebhayisikili ekhululekile. Uma kudingeka, ukukhanda kungenziwa ngokuzimela. Ezitolo, lezo zithuthi zidayiswa ngendlela ehlangene.
Okubaluleke kakhulu ukubukeka kwamasondo, ngoba ikhwalithi yokugibela ixhomeke kubo. Zihlukile ngobukhulu, okuyinto ngayinye yezokuthutha ezihlukile. Uma ibhayisikili ihloselwe ukuhamba kwedolobha, amavili amakhulu amakhulu kufanele akhethwe. Ukuthutha okuphezulu kuphela futhi okulula kunikeza ukuhamba okunethezeka.
Indlela yokudubula i-PM ngendlela efanele. Ukudubula emgqeni ovela kusikhali sokulwa. Umgomo wokudubula
Uyini Signa noma Saina?
Biathlete Dasha Domracheva: Biography, izimpumelelo kwezemidlalo, empilweni yakho
"I-Institute for Noble emaNtombazaneni": nabalingisi. "I-Institute for Noble emaNtombazaneni": indaba futhi indima
Deadlift: Kubaluleka ukusebenza
Inkinga Dynastic, noma lapho zobukhosi ezingenalutho
Ngusiphi usuku ukufakwa kombungu?
"Ihlathi bezindlu" - ukuzilibazisa isikhungo ku Chelyabinsk esifundeni
Ukudla uhlobo 2 abanesifo sikashukela. Amathiphu namacebo